နေရာစုံပုံစံမျိူးစုံ – Grab Love Story
ကျွန်တော် အောင်ဇော်တစ်ယောက် ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ Company လေးတစ်ခုမှာ ဝင်လုပ်နေသူပါ ။ အဆောင်ငှါးကာ နေခဲ့တာ အဆောင်ဖိုးမရှင်းပေးနိုင်တာ နှစ်လကြာပါပြီ၊ ကျွန်တော်အဆောင်ရှင် လင်မယာက တရုတ်တွေပါ။ လူမယားနှစ်ယောက် အသက်တွေ ကွားခြားကြပါတေ၊ မိန့်မက ၄၀ ကျော်၊ ယောက်က်ျားက ၅၀ ကျော်ပါ ၊ သူတို့လင်မယားမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး သမီးမှာလည်း ကလေးက အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ ၊ ………. တနေ့တော့ ကျွန်တော်နေတဲ့ အိမ်ခန်းကို အဆောင်ရှင်မိန့်မ ရောက်လာခဲ့ပါတေ။ သူက ကျွန်တော့ကို အောင်ဇော်ရယ် မင်း အခန်း ငှါးအုံးမှာလား အန်တီမှာ အခန်းငှါးမဲ့သူတွေ လာမေးနေကြတေကွယ် ပြောလာခဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို အားနာမိသလိုဘဲ အောက်ကျိုးကာ .. ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ပါ အန့်တီ။
ကျွန်တော်အလုပ်က လစာထုတ်ရင် အားလုံးကို ရှင်းပေးပါ့မေ ခင်ဗျား ပြောလိုက်တော့ သူက …….. အန်တီသိပါတေကွယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲ အန်တီမငှါးလိုက်ပါဘူး ပြောပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အိပ်ခန်းကို ဝင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်က လူပျိုတွေထဲ့မှာ အညစ်ပတ်ဆုံးဘဲ ထင်ပါတေ။ တောင်ပန်ပါတေ အန်တီ ကျွန်တော့အခန်းထဲ ဘာမှမရှင်းဘဲ ထားမိပါတေ လို့ တောင်းပန်လိုက်ပါတေ။ တကယ်လည်း အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော်က ဘာတစ်ခုမှ ရှင်းလင်းထားတာ မရှိပါဘူးဗျာ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီက အိပ်ရာရဲ့ ခြေရင်းမှာစုပုံလို့ အိပ်ရာဘေးမှာ မလျှော်ထားတဲ့ အဝတ်တွေလည်းရှိနေတေ။ သူက အဝတ်တွေကို ရှင်းလိုက်ပြီး အခန်းရဲ့ဒေါင့်တစ်နေရာမှာ အားလုံးကိုယူပြီး စုပြီးထားလိုက်ပါတေ။… ဟာ… အန်တီ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာလို့ပြောပြီး သူ့ဆီကနေ လုယူပေမဲ့။
သူက မပေးဘဲ သူကိုယ်တိုင် သွားထားကာ စုပုံပေးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာ ငါတော့ အလုပ်ကအဆင်မပြေရတဲ့အထဲ အခန်းလေးကနေ ဆင်းပေးရမဲ့ကိန်းပါလား လို့ စိတ်မှာ အားငယ်စိတ်တွေဝင်သွား မိပါတော့တေဗျာ……….. အန်တီက ကျွန်တော့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူဝတ်လာတဲ့ မိုးပြာရောင်ဝမ်းဆပ်ကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ အတွင်းခံကို ချွတ်ရင်းနှင့် ကျွန်တော့ကို…… မင်းရဲ့အခန်းဖိုး ကျေအေးပေးဘို့အတွက် စရံတင်တဲ့သဘောပေါ့ကွယ် ပြောပြီး အကုန်လုံးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကို မိမွေးတိုင်းဘဲ မြင်နေရပါတော့တေဗျာ။ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ကာရိုးရိုးလေးနေရင် အရမ်းလှတေလို့ တွေးမိနေတာ ၊ အခုလိုဘဲ အဝတ်အစားမပါတဲ့ သူရဲ့ဘော်ဒီကိုမြင်မိတော့ ညီလေးကတင်းလာပြီး ဂျိန်းဘောင်းကဖုထွက်လာတာကို အန်တီကကြည့်ပြီး……။
အန်တီဆွဲဆောင်မူရှိသေးတာကို တွေ့ရလို့ အရမ်းပျော်တေကွာ ပြောပြီး ကျွန်တော့ရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး အိပ်ရာကိုဆွဲခေါ်သွားတော့ စိတ်ညှိ့ခံရတဲ့သားကောင်လိုဘဲ သူ့နောက်ကိုဘဲ လိုက်ပါသွားပါတော့တေဗျာ ၊ သူက ကျွန်တော်နှင့် ဒီအခြေအနေမရောက်ခင်မှာ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းလိုဘဲ ဆက်ဆံပြီး ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းဘဲ နေခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမဲ့အခုလိုဘဲ အခြေနေရောက်မှာလို့ မတွေးမိခဲ့ပါဘူးဗျာ ။ သူကရိုးရိုးဘဲ ထင်ခဲ့မိတေလေ အခုတော့မှ သူရဲ့ပွင်လင့်စွာ ဆက်ဆံမူကို သိရပါတော့တေ… သူက…. မင်းက အန်တီကို ကြည့်ပြီး မင်းညီလေး ခေါင်းထောင်တာကို သိပါတေကွယ် ဟင်း…ဟင်း… ပြောကာ ကျွန်တော့ရဲ့အဝတ်တွေကို ကူချွတ်ပေးပါတော့တေ ၊ အဝတ်တွေချွတ်ပေးပြီးမှ သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကို ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်မိတော့
အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် အန်တီအရွယ်မှာ နို့ကြီးတွေက အနည်းငယ်သာတွဲကျနေပြီး ဘော်ဒီရဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကလည်း ပြစ်ချက်ပြောစရာကို ရှာမတွေ့မိပါဘူးဗျာ။ သူက ပက်လက်အနေအထား နေပေးပြီး ကျွန်တော့ကိုလက်နှင့် ဆွဲကာခေါ်တော ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်ကလက်ထောက်ပြီး မှောက်ချလိုက်တော သူ့လက်က ကျွန်တော့ညီလေးကိုကိုင်ပြီး သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ကာ ကျွန်တော့ကိုခွထားတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းနှင့်ဆွဲလိုက်တောတေ။ ညီလေးကတစ်ဝက်လောက်သာဝင်ပြီး အသုံးပြုပုံမရတာ အရမ်းကြာနေပြီမို့ထင်တေ တင်းကျပ်စွာဖြေးဖြေးလေး အဆုံထိရောက်ထပ်ပြီး သွင်းလိုက်ပါတေ၊ သူလက်က ကျွန်တော့ကျော့ပေါ်မှာ အပေါ်အောက်စုန်ဆန်ကစားပေးပြီး အောက်ကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့ဆောင်လုပ်ချက်နှင့်အပြိုင် လုပ်ပေးပါတေ။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆောင့်ဆောင်ကာ အမြန်လုပ်လိုက်တော့ သုံးမိနစ်အကြာမှာ ပြီးသွားတေ ။ သူက ကျွန်တော့ကို…. ဟင်း… ပြီးတာလည်း မြန်လိုက်တာကွာ ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော့ညီလေးကို ကျွတ်မသွားအောင် ခြေနှစ်ဘက်နှင့်လိမ်ကျစ်ကာ ထားပါတေ ။ ညီလေးကလည်း လုံးဝပြန်မကျဘဲ သူ့ညီမလေးအထဲမှာ ဝင်အောင်းနေတော့… ကျွန်တော်ကို သူက.. မင်း.. မိန်မလုပ်ဖူးသေးဘူး ဆိုတာကို အန်တီ သိပါတေကွာ အဲ့ဒါကြောင့် အန်တီက မင်းကိုရွေးတာ ပြောလာခဲ့ပါတေ ။ ကျွန်တောက သူကို အဆောင်စရိတ် ကျေအေးဖို့အတွက် လုပ်ပေးရတေလို့ စိတ်မှာမတွေး သူ့ကိုချစ်လို့ သူ့ရဲ့အထိအတွေနှင့် သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကိုကြိုက်လို့ လုပ်ပေးတာကို စိတ်မှာငြင်းမရအောင်ပါဘဲဗျာ…. ကျွန်တော်ကလည်း ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတာ ဖြစ်သလိုဘဲ။
ဒီအထိအတွေအရသာကို ထပ်လိုချင်သေးတော့ သူ့ကို… အန်တီ စိတ်ကျေနပ်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ့မေ ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ချင်သေးတေ လို့သူ့ကို ပြောလိုက်တော့ သူက ခေါင်ညှိတ်ပြပြီး လက်ခံပါတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို စကားပြောပြီးတာနှင့် သူ့ကိုစတင်ကာလုပ်ပေးပါတေ သူလည်းမပြီးသေးတော့ စိတ်ဆန္ဒမပြည့်ဝသေးတော ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ကျွန်တော့ ဆောင့်လုပ်တာကို အောက်ကနေ မျက်လုံးလေးမှေးကာ ကျေနပ်စွာခံယူပြီး သူ့နုတ်ကလည်း…. အား…. ကောင်တေ…အောင်ဇော်…. ဒီအတိုင်းဘဲ…အား…. မြန်မြန်လုပ်… လုပ်ပေးပါ…အား… ညီးသံတွေနှင့်အတူ လက်ကလည်း ကျော့ပေါ်မှာ အထက်အောက် ကစားပေးပါတော့တေ ၊ ကျွန်တော်လည်း ဒီတစ်ကြိမ်မှာ သူ့ကို ၁၀မိနစ်ကြာကြာ လုပ်ပေးပြီး သူပြီးသွားပါတေ။
သူပြီးတဲ့နောက် ၁၀ချက်ဆောင့်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ပြီးသွားပါတော့တေ.. သူနှင့်အတူအဲ့ဒီနေ့က သုံးကြိမ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး သူက နောက်တစ်ပတ် ထပ်တွေ့ကြမေ လို့ ချိန်းဆိုပြီး သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ပြန်ဝတ်ပြီး ကားမောင်းပြီး ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တေ ၊တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က ဒီအခန်းကိုငှါးနေခဲ့တာ ၆ လကြာနေပြီး ပထမ ၄လမှာ အခန်းခကို ပုံမှန်ဘဲ ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ အခုနှစ်လမှာ အခန်းဖိုးကို ကျွန်တော်မရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အရင် အခန်ခတွေ သွားပေတုန်းကတည်းက အန်တီရှင်းရှင်းက ကျွန်တော့နှင့်ကလယ်ကျယ်စယ် နေခဲ့ကြပေမဲ့ သူ့ရဲ့ဘော်ဒီကို မြင်ရတိုင်း ညီလေးက ခေါင်းထောင်နေခဲ့တာ၊ သူတို့မိသားစု အားလုံးနှင့်လည်း အရမ်းရင်းနှီးလို့ ဒီလိုနေတေလို့ဘဲ ထင်မှတ်ခဲ့လေ…….. နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာ သူ့အိမ်ကိုလာဖို့ ကျွန်တော့ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတေ။
သူ့ယောက်က်ျားက မြို့ထဲကို အလုပ်ကိစ္စနှင့်သွားတေ အမြန်လာခဲ့ပါလို့ ကျွန်တော့ကို ဖုန်းနှင့်ခေါ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူတို့အိပမ်ကို သွားလိုက်ပါတေတေ။ ခြံအကျယ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လှလှ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူ့တို့အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ အန်တီရှင်းရှင်းက ကျွန်တော့ကိုအိမ်ထဲကို ဆွဲသွင်းပြီး တံခါးပိတ်လိုက်ကာ နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြီး ညီလေးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်လာတေ ။ ညီလေးက သူခေါ်ကတည်း တွေးရင်းနှင့်ကိုခေါင်းက ထောင်နေပြီလေ ။ သူကပြုံးပြီး ကျွန်တော့ကိုစိုက်ကြည့်ကာ ညီလေးကိုကိုင်ပြီး ဒီလို.. သန်စွမ်းတဲ့မင်းကို အန်တီက သဘောကျနေတာကွ ပြောပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်က သူတို့လင်မယားအိပ်ခန်းကို ကျွန်တော့ကိုခေါ်သွားပါတော့တေ။……. သူတို့အိပ်ခန်းကိုရောက်တော သူ့ရဲ့အနက်ရောင်ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး။
အင်္ကျီအဖြူရောင်နှင့်ဘရာကို ဖြေးဖြေးချင်း ကျွန်တော့ရှေ့မှာ ချွတ်ပြတေ ၊ အတွင်းခံဘောင်လေးတစ်လုံးဘဲ ကျန်တော့တဲ့သူက ကျွန်တော့ဆီကို တလှမ်းချင်း လမ်းလျှောက်လာပြီး ကျွန်တော့ရဲ့အဝတ်အစားအကုန်လုံးကို ချွတ်ချပေးပါတေ။ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပြီးမှ သူက သူတို့ရဲ့အိပ်ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အနေအထားနှင့် သူ့ရဲ့အတွင်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အနီးကိုသွားလိုက်ပါတေ။ သူပေါင်ကိုဖြဲပြီး သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားကိုဝင်လိုက်တော့ သူခြေနှစ်ဘက်က ကျွန်တော့ကို ခွကာလိမ်ကျစ်ပြီး ညီလေးကိုသူ့လက်နှင့်တေ့ကာ ဆွဲယူလိုက်ပါတော့တေ။…… ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်ကနေလက်ထောက်ပြီး ခါးကိုအားပြုပြီး သူ့ကိုတချက်ချင်းဘဲ လုပ်ပေးပါတေ။ သူကလည်း ကျွန်တော့ကိုပြန်ပြီး ခြေနှင့်ဆွဲပြီး ပြန်လုပ်ပေးပါတော့တေ။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုလုပ်ပေးတာ ၅ မိနစ်အကြာမှာဘဲ ပြီးသွားပါတေ။ သူကမပြီးသေးတော့ ရယ်ကာ ကျွန်တော့ကို ဟင်း…ဟင်.. မြန်လိုက်တာကွယ်… ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားလေကွာ လို့ သူကပြောလာပြီး ကျွန်တော့ကိုသူ့အပေါ်က မဆင်းစေဘဲ ဒီအတိုင်းခြေနှစ်နှင့်လိမ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မေ .. ပြောလိုက်တော.. သူက ကျွန်တော့ပါးကို လိမ်ဆွဲပြီး ဒီလို အပေါ်ကနေ လုပ်လာတာကြာပြီ အန်တီလို့ ခေါ်နေတုန်းဘဲကွာ ရှင်းရှင်းလို့ ခေါ်ရင်ခေါ် မဟုတ်ရင် မမ လို့ဘဲ ခေါ်ပါလား.. ပြောလာတော့ ကျွန်တော်က ဟုတ်ကဲ့မမ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူကပြုံးပြီး အင်း ဆိုပြီး ခေါင်းညှိတ်ပြပြီး ကျွန်တော့ညီလေးက လုံးဝပြန်မကျသေးတော့ သူက အောက်ကနေ ခြေနှင့်ဆွဲကာ လုပ်ပေးလာတော့။
ကျွန်တော်လည်း သူအပေါ်ကနေ ပြန်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါတေ ။ သူလည်း ကောင်းလာသလိုဘဲ ကျွန်တော်လည်း အရသာအရမ်းတွေ့နေတေ ။ သူ့ရဲ့ညီမလေးက ဦရှောင်စွတ်က မလုပ်ဘဲ ထားလို့ အပျိုမလေးလိုပြန်ဖြစ်နေပြီ ကျွန်တော်လည်း အပေါ်ကနေ လုပ်ပေးရင်း သူ့ကို အန်တီ.. ဪ…မမ ကောင်းလားဗျ… ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာ..ကောင်လား…အား.. မေးလိုက်ကာ လုပ်ပေးတော့ ။ သူက မျက်လုံးမှေးပြီး ကျွန်တော့ကို.. အရမ်းကောင်တေ…မောင်..အား… ကောင်တေ… အား…ရှီး…. လုပ်လုပ်ပါကွယ်… ခြေထောက်နှင့်ဆွဲပြီး အောက်ကနေခံပေးရင်း ပြောပေးပါတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို နောက်၁၀မိနစ် လုပ်ပေးပြီး သူနှင့်အတူ ပြီးသွားပါတော့တေ။ အား.. အရမ်းကောင်တေ မောင်ရယ်.. လို့ပြောပြီး သူ့အပေါ်ကနေ မှောက်ချကာ။
အမောဖြေနေတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ပါးကိုနမ်းပြီး ဆံပင်တွေကိုသပ်ပေးကာ ခြေနှစ်ချောင်ကိုတော့ ပိုပြီးလိမ်ကျစ်ကာထားပါနေ။ သူ့အပေါ်ကနေ အမောဖြေပြီးသွားမှ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်ပြီး ကိုယ့်အခန်းကို ပြန်မေလို့ လုပ်နေတုန်း သူက သူ့ညီမလေးကို သုတ်လိုက်ပြီး ထမိန်ရင်သျားကာ ထလာပြီး တံခါးနားမှာ ဖက်ကာနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလာပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကို ကိုင်ကာဆွပေးတော့ ကျွန်တော်လည်း ကုန်ခမ်းနေတဲ့အားအင်တွေ ပြန်ပြည့်လာသလိုဘဲ သူ့ကိုပြန်ပြီးတင်းတင်းဖက်ကာ နံရံပေါ်ကပ်ပြီး သူ့ရဲထမိန်ဖြေချလိုက်ပါတေ။ ပုဆိုးကိုဖြေချပြီး ပြန်လည်ကာ ခေါင်းထောင်လာတဲ့ညီလေးကို သူ့လက်နှင့်သူ့ညီမလေးဆီမှာ တေ့ကာပေးတော့ သူ့ရဲခြေတစ်ချောင်းကို မပြီး ခါးမှာတင်ကာ ညီလေးကိုအဆုံးထိရောက်အောင် တစ်ချက်တည်းနှင့်သွင်းလိုက်ပါတော့တေ။
အိုး…. မောင်ရယ်…. ကောင်လိုက်တာကွယ်… အား… ရှီး…. ညီသံလေးပေးရင်း နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ သူလည်ပြန်ပြီး ဆောင့်လုပ်ပေးလာတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့ကို ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နှင့်ကိုင်ကာ ကစာရင်းပေးပါတေ။ သူ့ကိုနံရံမှာကပ်စေပြီး မညှာတမ်းဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးပါတေ။ သူကလည်းတုံပြန်မူကောင်တော့ ကြမ်းကြမ်းဘဲ ၅ မိနစ်ကြာ လုပ်ပေးပြီး သူ့ကိုနံရံဘက်ကို လက်ထောက်စေပြီး သူ့အနောက်ကနေ ဖြူဖွေးတဲ့တရုတ်မကြီး ဖင်ကိုကြည့်ရင်းနှင့် ကြမ်းကြမ်းကြီး ဆောင့်ဆောင့်ကာလုပ်ပလိုက်တော့တေ။ အား… မောင်ရယ်..အရမ်းထိတေကွာ… အား… အမလေး.. ကောင်းလိုက်တာနော်.. အား.. ဆိုတဲ့ ညီသံလေးတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာတော့တေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုကြမ်းကြမ်းဆောင့်လုပ်ပြီး မမ.. ကြိုက်လား..အား.. မောင်..လုပ်ပေးတာ…ကြိုက်လား..အား… မမရယ်… ကောင်းလား..။
ပြောလည်းပြော ဆောင့်လုပ်ပေးပြီး အချက် ၆၀ ကျော် ဆောင့်လုပ်ကာ ပြီးသွားပါတော့တေ…….. သူ့ကိုလုပ်ပြီး နံရံမှာ နှစ်ယောက်သားပူးကပ်ပြီး အမောဖြေလိုက်ပါတေ။ သူ့လက်က ကျွန်တော့တင်ပါးကို တင်းတင်းဆွဲကာထားပြီး … အရမ်းချစ်တေ မောင်ရယ်. .. ပြောလာခဲ့ပါတေ ။ ကျွန်တော်လည်း အဝတ်အစားတွေကို ပြန်ပြင်ဝတ်တော့ အန်တီရှင်းရှင်းက ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်ကာ နောက်တစ်ပတ်လည်း ခေါ်မှာလို့ ပြောလာပါတေ။ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်ကဲ့ပါ ပြောပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တေ။ နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း ရုံးပိတ်ရက်မှာ အန်တီရှင်းရှင်းဆီမှ ဖုန်းဖြင့် သူ့ယောက်ျားက မြို့ထဲကိုသွားတေ အမြန်လာခဲ့ပါလို့ ဖုန်းဆက်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူတို့အိမ်ကိုရောက်သွားပါတော့တေ။ အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်တော့ သူကကျွန်တော့လက်ကို ဆွဲပြီး သူ့တို့လင်မယားအိပ်ကုတင်ဆီသို ခေါ်သွားပါတော့တေ။
ကျွန်တော်တို့လည်း အိပ်ခန်းရောက်တော့ သူကကျွန်တော့ကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး ကျွန်တော့အဝတ်အစား အားလုံးကိုချွတ်ပေးပြီး ကုတင်ပေါ်ကိုတွန်ချလိုက်ပါတေ။ သူရဲ့ အိမ်နေရင်းဝတ်ထားတဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကို ချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတေ။ဂါဝန်တစ်ခုဘဲ ဝတ်ထားတော့ ချွတ်လိုက်တာနှင့် အဝတ်စားမဲ့ ဘော်ဒီမြင်တာနှင့် ညီလေးကအော်တို ခေါင်ထောင်လာခဲ့တေ။…….. သူက ကုတင်ပေါ်တက်လာတာနှင့် ညီလေးကိုလက်နှင့် ဂွင်းသုံးချက်တိုက်ပေးပြီး အပေါ်ကနေခွကာ ထိုင်ချတေ။ အား… ဆိုတဲ့ ညီသံနှင့်အတူ အဆုံးထိရောက်အောင် ဖြေးဖြေးလေးထိုင်ချပြီး ကျွန်တော့ကို နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြီးမှ အပေါ်ကနေ အမြန်တလှည့် အနှေးတလှည့်လုပ်ပေးပါတော့တေ ။….. အား… ကောင်လိုက်တာကွယ်…မောင်လေးရယ်… အား….. ပြောလည်းပြော လုပ်လည်းလုပ်ပါတော့တေ ။
သူက ၅ မိနစ်လောက်လုပ်ပေးပြီး သူပြီးချင်လာတော့ ဘေးကို ဆင်းကာ ပက်လက်အနေအထားနေပေးပြီး… မောင်ရယ်…မမပြီးချင်လာပြီ… မြန်မြန်လုပ်ပေး…တောင်ဆိုလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်ကနေ လက်ထောက်တော့ ညီလေးကိုသူ့လက်ကကိုင်ပြီး တေ့ပေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုအပေါ်ကနေ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူပြီးသွားတေ ။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးခါနီးလို့ မြန်မြန်လုပ်နေတုန်း တံခါးပွင့်သံထွက်လာပြီး ဂျိန်း ပြန်ပိတ်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်တာ ဦးရှောင်စွတ်က ဒေါသသံနှင့် မရပ်နဲ့ ဆက်လုပ် ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်တာကိုရပ်ပြီး အဝတ်အစားကောက်ကာ ပြေးဖို့ကြံတော့ သူက ဒေါသနှင့်.. ဟေ့ကောင် အောင်ဇော်.. မင်းကိုငါက မရပ်နဲ့ဆက်လုပ်လို့ ပြောတေလေ လို့ ပြောလာတော့။
အန်တီရှင်းရှင်းက ကျွန်တော့ဆီကို လျှောက်လာပြီး ကြောက်စိတ်နှင့် ပျောသွားတဲ့ညီလေးကို တစ်ခါမှလုပ်မပေးဘူးတဲ့ ပါးစပ်နှင့်လုပ်ပေးလာပါတော့တေ ၊ညီလေးကလည်း အာငွေ့လေးပေးတော့ ပြန်ပြီး ထောင်မတလာတော့ အန်တီရှင်းရှင်းက ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲခေါ်ပြီး ပက်လက်အနေထားလေး နေပေးပြီး လက်နှင့် ကျွန်တော့ကိုဆွဲပြီး ခြေနှစ်ချောင်းကြားမှာညှပ်ပြီး ညီလေးကိုကိုင်ကာ သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပေးပါတေ။ ကျွန်တော်နှင့်အန်တီရှင်းရှင်းကို ကြည့်ပြီး ဦရှောင်စွတ်က….. အရင်ရက် မင်းဆီကို ရှင်းရှင်းလာပြီး လုပ်ကြတာကိုလည်း ရှင်းရှင်းက အိမ်ပြန်လာတော ငါ့ကို ပြောလို့ သိပြီးပြီ ငါကမစွမ်းတော့ဘူး သူ့အတွက်က သန်စွမ်းတဲ့ကောင်လေးလိုတေ ဆိုတာကို မင်းလည်းသိတေ ငါလည်းသိတေ ကဲလုပ်တော့.. ရယ်ကာပြောပြီး အန်တီရှင်းရှင်းရဲ့ ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးပြီး ကျွန်တော့ကို ကြည့်ကာ ပြောပါတေ။
ကျွန်တော်လည်း အန်တီရှင်းရှင်းကို ၅ မိနစ်လောက်လုပ်ပေးပြီး ပြီးသွားပါတော့တေ ။ အမောဖြေပြီး အန်တီရှင်းရှင်းဘေးမှာ မှေးနေတုန်း ဦးရှောင်စွတ်က သူပန်းမသေခင်မှာ မှီဝဲခဲ့တဲ့ ဆေးအရက်ကို တစ်ခွက်ငှဲကာ ကျွန်တော့ကိုတိုက်ပေးပြီး သူက….. အောင်ဇော် ငါကမစွမ်းတာတော့ အမှန်ဘဲကွ ဒါပေမဲ့ တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားက သူ့မိန့်မအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားကာ သူ့အတွက်ဦးစားပေးတတ်တာကို ပြလိုက်ပါကွာ လို့ပြောတော့ အန်တီရှင်းရှင်းက သူ့ယောက်ျားဦးရှေင်စွတ်ရဲ့ နဖူးကိုနမ်းလိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကိုပါ ဆက်နမ်းပါတေ သူက နမ်းရင်းနှင့် ညီလေးကို ဆွပေးပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ညီလေးအရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး စုပ်ပေးပါတေ ၊ ညီလေးခေါင်းထောင်လာတော့ သူက ကျွန်တော်နှင့်ဦးရှေင်စွတ်ကို ကုတင်အနီးကိုခေါ်သွားပြီး။
ဦရှောင်စွတ်ကို ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်စေပြီး သူက ဦးရှောင်စွတ်ကို ကုတင်အောက်ကနေ ကုန်းကာနမ်းပြီး ဖင်ကိုကော့ကာ ပေးထားတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အနောက်ကနေပြီး သူ့ညီမလေးဆီမှာ ညီလေးကိုတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးလိုက်ပါတောတေ။ အား… ရှီး… ဆိုတဲ့ ညီသံလေး ထွက်လာပြီး ဦးရှောင်စွတ်ကို တစ်ချက်နမ်းပြီး ခေါင်းလေးကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီး ကိုယ်ကိုကျွန်တော့ရင်နှင့်ကပ်ပြီး နမ်းကာနောက်ပြန် လုပ်ပေးပါတေ။ ဦးရှောင်စွတ်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လုပ်တာကိုကြည့်ပြီး သူက… အရမ်းလိုချင်သူကို အရမ်းသန်စွမ်းသူနှင့်မှ ကိုက်ညီတာပါ.. မောင်အောင်ဇော်ရယ် မင်းက မင်းအန်တီနှင့် ကိုက်ညီတဲ့ သူလိုအပ်တိုင်းမှာ မင်းဘဲ ဦးကိုယ်စား လုပ်ပေးပါကွယ်.. ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကုန်သွားပြီး။
အန်တီရှင်းရှင်းကို အနောက်ကနေ သူ့နို့တွေကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ကာလုပ်ပြစ်လိုက်တာ ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ နှစ်ယောက်သားအတူတူပြီးကာ ကုတင်ပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားပါတော့တေ…….… ကျွန်တော်နှင့်အန်တီရှင်းရှင်းဟာ အခုဆိုရင် ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘဲ အေးဆေးဘဲ သူလိုအပ်ရင်လုပ်ကြသလိုဘဲ ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်လည်း သူကငြင်းဆန်မူ မရှိဘဲ လုပ်ဖြစ်ကြပါတော့တေ ။ ကျွန်တော်လည်း လစာထုတ်တော့ အခန်းခကိုသွားပေးတော. အန်တီရှင်းရှင်းမယူဘဲ… မောင်ရယ် မောင့်အခန်းခကို မယူပါဘူးကွာ မောင် ဒီအိမ်ကိုဘဲ ပြောင်လာခဲ့တော့ ဒီအိမ်မှာဘဲ နေတော့ ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိုက်ဆံကို သျမ်းဆည်းလိုက်ပြီး အခန်းကို အန်တီရှင်းရှင်းနှင့်သွားကာ အဝတ်အစားတွေကို ထုတ်ပိုးပြီး သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတေ။
အိမ်ကိုရောက်တော့ အောက်ထပ်က အခန်းလွတ်တစ်ခုမှာ ပစ္စည်းတွေနေရာချပြီး သူနှင့်ကျွန်တော် အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေနှင့် စိတ်ကြွပြီး သူ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာ လက်ထောက်စေပြီး အနောက်ကနေ သူ့ကိုဆောင့်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တေ။ လုပ်နေတုန်းမှာဘဲ အန်တီရှင်းရှင်းရဲ့ သမီးမိသားစု ရောက်လာပြီး အန်တီရှင်းရှင်းကို ခေါ်တော့ လုပ်ကောင်းနေတုန်းမှာ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ပြန်ဝတ်ပြီး သူရှေ့ကထွက်သွားပါတေ။ သူရှေ့က ထွက်သွားပြီး ၂ မိနစ်ကြာမှဘဲ ကျွန်တော်လည်း ထွက်လိုက်ပြီး သူတို့နုတ်လိုက်ပါတေ ။ ကောင်းကောင်းလေးက ကျွန်တော်နှင့် အရမ်းခင်တော့ ကျွန်တော့အနားမှာဘဲ နေနေတေ။ အန်တီရှင်းရှင်းက သားတို့သမီးစားဖို့ တစ်ခုခုလုပ်လိုက်အုံးမေ ပြောပြီး မီးဖိုခန်းကို ဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်းကူပေးပါ့မေ အန်တီ ပြောကာ သူ့နောက်ကို လိုက်သွားပါတေ….။
အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ တီဗွီကြည့်နေတဲ့ အန်တီရှင်းရှင်းသမီးမိသားစုကို ထားကာ ကျွန်တော်လည်း အန်တီရှင်းရှင်း ရှိတဲ့ မီဖိုခန်းကိုဝင်လိုက်တော့ အန်တီရှင်းရှင်းက ပြုံးပြီး အပြေးကလေးလာကာ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီးတော့ စားပွဲမှာလက်ထောက်ကာ နေပေးတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ထမိန်ကိုခါးအထိ လှန်လိုက်ပြီး ညီလေးကို တေ့ပြီး အဆုံးထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်ပါတေ အရှိန်ကောင်းတုန်း ရပ်လိုက်ရတာမို့ သူ့ညီမလေးကလည်း အရည်တွေရွဲနေပြီ သူကလည်း ကျွန်တော့ကို နောက်ပြန်လှည့်ပြီး…. လုပ်ကောင်းနေတုန်းမှာကွယ်… အား.. မောင်.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပြီးအောင်လုပ်ကွာ လို့ တိုးတိုးလေးပြေပါတေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီး အမြန်ဆောင့်လုပ်နေတုန်းမှာဘဲ ကောင်းကောင်းလေးက ဖွားဖွားခေါ်ပြီး ရောက်လာတော သူ့ရဲထမိန်ကိုဖုံးထားလိုက်ပြီး။
ရပ်မေလုပ်တော့ အန်တီရှင်းရှင်းက ကျွန်တော့ကို နောက်ပြန်ဆွဲပြီး ဘေးကခုံကို ဆွဲကာ ကျွန်တော်ကိုထိုင်စေပြီး ကျွန်တော့ အပေါ်မှာဘဲ သူထိုင်ကာ ကောင်းကောင်းလေး အနီးရောက်လာတော့ ဖွားဖွား သား ဗိုက်ဆာတေ ၊ ဖွားဖွားက ဦးအောင်ပေါ်မှာ ဘာလို့ထိုင်နေတာလဲဟင် မေးလာတော့ ကျွန်တော်ဘဲ ကောင်းကောင်းကိုကြည့်ကာ။ သား ဖွားဖွားက ခေါင်းမူးသွားလို့ ဦးအောင်က အနောက်ကနေနိပ်ပေးနေတာပါ သားအပြင်ကစောက့်နော် သားအတွက် ဦးအောင်က စားစရာတွေ ယူလာပေးမေ ပြောလိုက်မှ ကောင်းကောင်းလေး ပြန်ထွက်သွားတေ ကလေးရှေ့မှာ ရှိနေတာတောင်မှ အန်တီရှင်းရှင်းက ထိုင်ရက်နှင့် စကော့ဝိုင်းလေးဝိုင်ကာလုပ်ပေးပြီး……။
အား… ရှီး.. ကျွတ်..ကျွတ်.. ညီလိုက်သေးတေ ကောင်းကောင်းလေး အပြင်ထွက်သွားမှ သူ့ကို စားပွဲပေါ်မှာ မှောက်စေပြီး အနောက်ကနေ သူ့ဖင်ဖြူဖြူကြီးကို ကြည့်ပြီး ခါးကိုကိုင်ကာ ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးပြီး အချက်နှစ်ကျော်မှာ နှစ်ယောက်သား ပြီးသွားကြပါတော့တေ…… အဲ့နေ့က စားသောက်ပြီးမှ အန်တီရှင်းရှင်းသမီးတို့ မိသားစုပြန်သွားပြီး ကျွန်တော့အိပ်ရာပေါ်မှာ တစ်ကြိမ် သူတို့လင်မယားအိပ်ရာပေါ်မှာ တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်ဖြစ်ပါသေးတေ။ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ပြောင်းပြီး နယ်မှာနေမှ သူတို့အိမ်မှာ မနေဖြစ်တော့ဘူး… ဒါပေမဲ့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် လာရင် သူနှင့်တော့ အမြဲလိုလိုဘဲ သူတို့အိမ်ရဲ့နေရာစုံမှာ ပုစံမျိုးစုံစွာ လုပ်ဖြစ်ကြပါတေဗျာ…… ပြီးပါပြီ။